1 Ndị Eze 12 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ndị Eze nke Mbụ 12:1-33
Rehoboam gwara ndị Izrel okwu ọjọọ (1-15)
Ebo iri nupụụrụ Rehoboam isi (16-19)
E chiri Jeroboam eze Izrel (20)
A gwara Rehoboam ka ọ ghara ịlụso ndị Izrel agha (21-24)
Jeroboam kpụrụ nwa ehi ọlaedo a na-efe ofufe (25-33)
12 Rehoboam gawara Shikem, n’ihi na ndị Izrel niile gara Shikem+ ka ha chie ya eze.+ 2 Ozugbo Jeroboam nwa Nibat nụrụ ya (ọ ka nọ n’Ijipt n’oge ahụ n’ihi na ọ gbagara ebe ahụ maka Eze Solomọn, o bikwa n’Ijipt),+ 3 ndị Izrel ziri ya ozi ka ọ bịa. Mgbe ọ bịara, ya na ndị Izrel niile bịara gwa Rehoboam, sị: 4 “Nna gị boro anyị ibu arọ.+ Ma, ọ bụrụ na i mee ka ihe dịtụrụ anyị mfe n’ọrụ siri ike nna gị nyere anyị, meekwa ka ibu* o boro anyị dị mfe, anyị ga na-ejere gị ozi.” 5 Ya asị ha: “Laanụ, bịaghachinụ n’abalị atọ taa.” Ha wee lawa.+ 6 Eze Rehoboam wee kpọọ ndị okenye, ndị jeere Solomọn nna ya ozi mgbe ọ dị ndụ, ka ha tụọrọ ya aro ihe ọ ga-eme. Ọ sịrị ha: “Gịnị ka m ga-aza ndị a?” 7 Ha asị ya: “Ọ bụrụ na i bido taa na-eme ka ị̀ bụ ohu ndị a, na-emere ha ihe ha rịọrọ gị, zaakwa ha ihe dị mma, ha ga na-ejere gị ozi mgbe niile.” 8 Ma, ọ nabataghị aro a ndị okenye ahụ tụụrụ ya. Ọ kpọrọ ụmụ okorobịa na-ejere ya ozi, ndị ya na ha tokọrọ, ka ha tụọrọ ya aro.+ 9 Ọ jụrụ ha, sị: “Gịnị ka anyị ga-aza ndị a bịara gwa m, sị, ‘Mee ka ibu* nna gị boro anyị dị mfe’?” 10 Ụmụ okorobịa ahụ ya na ha tokọrọ asị ya: “Ebe ọ bụ na ha sịrị gị, ‘Nna gị mere ka ibu anyị dị arọ, gịnwa mee ka ọ dịrị anyị mfe,’ ihe a ka ị ga-agwa ha, ‘Mkpịsị aka m nke ntakịrị ga-adị okpotokpo karịa úkwù nna m. 11 Nna m boro unu ibu arọ, ma m ga-atụkwasị ihe n’ibu unu. Nna m pịara unu ụtarị nkịtị, ma m ga-apịa unu ụtarị na-emerụsị mmadụ ahụ́.’” 12 Jeroboam na ndị Izrel niile bịakwutere Rehoboam n’ụbọchị nke atọ, otú ahụ eze gwara ha ka ha bịaghachi n’ụbọchị nke atọ.+ 13 Ma eze ji olu ike gwa ha okwu. Otú a ka o si hapụ aro ndị okenye tụụrụ ya. 14 Ọ gwara ha ihe ụmụ okorobịa ahụ tụụrụ ya aro ka ọ gwa ha. Ọ gwara ha, sị: “Nna m mere ka ibu unu dị arọ, ma m ga-atụkwasị ihe n’ibu unu. Nna m pịara unu ụtarị nkịtị, ma m ga-apịa unu ụtarị na-emerụsị mmadụ ahụ́.” 15 Otú a ka eze si hapụ ime ihe ndị Izrel rịọrọ ya. Ọ bụ Jehova mere ka ọ hapụ ime ya,+ ka Jehova wee mezuo ihe o si n’ọnụ Ahaịja+ onye Shaịlo gwa Jeroboam nwa Nibat. 16 Mgbe ndị Izrel niile hụrụ na eze emeghị ihe ha rịọrọ ya, ha sịrị ya: “Gịnị jikọrọ anyị na Devid? E nweghị ihe nwa Jesi anyị ga-eketa. Ndị Izrel, onye ọ bụla gaa fewe chi ya. Devid, lekọtawa ụlọ gị.” Ndị Izrel wee laa n’ụlọ* ha.+ 17 Ma Rehoboam nọ na-achị ndị Izrel bi n’obodo ndị dị n’ebo Juda.+ 18 Eze Rehoboam ziri Adoram,+ onye na-elekọta ndị eze manyere ka ha na-arụrụ ya ọrụ, ka ọ gaa hụ ndị Izrel, ma ha ji nkume tụgbuo ya. Eze Rehoboam jisiri ike rịgoro n’ụgbọ ịnyịnya ya gbalaa Jeruselem.+ 19 Ndị Izrel nọkwa na-enupụrụ ndị ezinụlọ Devid isi+ ruo taa. 20 Ozugbo ndị Izrel niile nụrụ na Jeroboam alọghachila, ha kpọrọ ya ka ọ bịa nzukọ ha, ya abịa, ha emee ya eze ndị Izrel niile.+ Naanị ebo Juda kwadosiri ọchịchị ndị ezinụlọ Devid ike.+ 21 Ozugbo Rehoboam lọrutere Jeruselem, ọ kpọkọrọ otu narị puku na puku iri asatọ (180,000) ndị agha a zụrụ azụ,* bụ́ ndị Juda na ndị Benjamin, ka ha gaa lụso ndị Izrel ndị ọzọ agha, ka Rehoboam nwa Solomọn nwee ike nwetaghachi alaeze ahụ niile.+ 22 Ezi Chineke wee gwa Shemaya,+ onye nke ezi Chineke, sị: 23 “Gwa Rehoboam nwa Solomọn eze Juda na ndị Juda na ndị Benjamin niile nakwa ndị fọdụrụ, sị, 24 ‘Jehova kwuru, sị: “Unu agala ịlụso ndị Izrel, bụ́ ụmụnne unu, agha. Onye ọ bụla n’ime unu laghachi n’ụlọ ya, n’ihi na ọ bụ m mere ihe a ji na-eme.”’”+ Ha wee mee ihe Jehova kwuru, laghachi n’ụlọ ha otú Jehova kwuru. 25 Jeroboam gara rụsie Shikem ike+ ma biri na ya. Ebe ahụ dị n’ala Ifrem bụ́ ugwu ugwu. O sikwa ebe ahụ pụta gaa rụsie Penuel ike.+ 26 Jeroboam sịkwara n’obi ya: “Alaeze a nwekwanụrụ ike imecha laghachi n’aka ezinụlọ Devid.+ 27 Ọ bụrụ na ndị a ana-aga achụ àjà n’ụlọ Jehova dị na Jeruselem,+ obi ha ga-adị ọzọ n’ebe Rehoboam eze Juda, bụ́ onyenwe ha, nọ. Ha ga-egbuzi m ma laghachikwuru ya.” 28 Mgbe eze na ndị na-adụ ya ọdụ kparịtachara, ọ kpụrụ nwa ehi ọlaedo abụọ+ ma gwa ndị Izrel, sị: “Ịna-aga Jeruselem ga na-enye unu ezigbo nsogbu. Lekwanụ Chineke unu, onye si n’Ijipt kpọpụta unu.”+ 29 O dowere otu nwa ehi ọlaedo ahụ na Betel,+ dowe nke ọzọ na Dan.+ 30 Ihe a mere ka ndị Izrel mehie.+ Ha na-agaruchakwa Dan efe nke dị ebe ahụ. 31 Jeroboam rụgasịrị ụlọ n’ebe ndị dị elu ka a nọrọ na ha na-efe chi dị iche iche. Ọ họpụtakwara ndị nkịtị na-abụghị ndị Livaị ka ha bụrụ ndị nchụàjà.+ 32 Jeroboam mekwara ka a malite ime otu ememme n’abalị iri na ise n’ọnwa nke asatọ. A na-eme ụdị ememme a na Juda.+ Ọ nọkwa n’elu ebe ịchụàjà ọ rụrụ na Betel+ chụọrọ ụmụ ehi ndị ọ kpụrụ àjà. Ọ họpụtakwara ndị nchụàjà ga na-eje ozi n’ebe ndị dị elu ọ rụrụ na Betel. 33 Ọ malitere ịnọ n’elu ebe ịchụ àjà ahụ ọ rụrụ na Betel achụ àjà n’abalị iri na ise n’ọnwa nke asatọ. O chepụtara ọnwa a n’onwe ya. O hiweere ndị Izrel ememme ha ga na-eme, gaakwa nọrọ n’elu ebe ịchụàjà na-esu àjà ọkụ.
1 Ndị Eze 12